Orinasa mpanadio efijery telefaona any China | SJJ
Ny telefaonan'ny tsirairay dia mitazona ny fitafiana sy ny triatra isan'andro, ary ny fikasihana tsy tapaka dia handoto ny telefaona finday, ary ny fananganana maloto dia mila diovina indraindray. Ary ahoana ny fanadiovana ny Smartphone anao mety manontany tena ianao? Ny fampiasana ny écran efitraninay sy ny mpanadio efijery miraikitra aminao dia afaka mamaha ity pr ...
Ny telefaonan'ny tsirairay dia mitazona ny fitafiana sy ny triatra isan'andro, ary ny fikasihana tsy tapaka dia handoto ny telefaona finday, ary ny fananganana maloto dia mila diovina indraindray. Ary ahoana ny fanadiovana ny Smartphone anao mety manontany tena ianao? Ny famahanana ny efijery sy ny mpanadio efijery miraikitra aminao dia afaka mamaha ity olana ity.
Sticky Screen Cleaner dia vita amin'ny lamba microfiber tena tsara, afaka manala mora foana ny diloilo, ny loto ary ny dian-tànana amin'ny efijery. Azo sasana sy ampiasaina indray mandeha imbetsaka. Manana karazana wiper efijery hafa koa izahay vita amin'ny PVC malefaka sy hoditra PU misy lamosina lamosina voadio miaraka amin'ny microfiber ho madio kokoa. Tsy hoe afaka manadio telefaona amin'ny fotoana rehetra fotsiny, fa azo ampiasaina ho fitaovana.
Ampiasaina ho mpanadio efijery, fijanonan'ny telefaona ary hanintona finday
Logo manokana namboarina tamin'ny alàlan'ny sublimation, vita pirinty, embossed ary loko feno.
Azo sasana, mateza ary azo ampiasaina indray
Attachment: String finday, Tady lohataona, tady elastika, rojo baolina, keychain, sns.
Ny endrika namboarina, habe, loko ary endriny namboarina dia raisina an-tanan-droa.
Teo aloha: Fehin-telefaona
Manaraka: Famantaranandro finday